Bona futhi ugcine ukufaka isicelo se-LS Vision's 360 degree panoramic IP Camera
I-LS-SPINGS5200 entsha ye-LS-SPD5200 (5x2MP) kanye ne-LS-SPD5300 (5x3MP) / LS-SPD5500 (5x5mp) Amakhamera agunyazwe ukuthi ubone ukuthi uzobona ukwengeza nokubala ikhamera, ukunweba wena ...
Umbono we-LS's New Ls-SPD5200 (5x2MP) kanye ne-LS-SPD5300 (5x3MP) / LS-SPD5500 (5x5mp) Amakhamera agunyazwe ukuthi ubone ukuthi uzobona ukwengeza nokubalwa kwekhamera, ukunweba isikhathi nemali. Kutholakala kumamodeli amabili, ezolile ne-IP66 ezilinganiswe ngaphandle, la makhamera we-megapixel angalungiswa ngogongolo olungu-360 ° noma ibhange livuka ukubukwa okungu-180 °. Womabili amamodeli agobhozayo awohloka, okuvumela ukusakazwa okungewona ama-fisheye kanye ne-fisheye ukudluliselwa ngasikhathi sinye. Lawa makhamera avela nama-LED amane we-IR ukuthuthukisa okuphezulu kwemifanekiso yasebusuku noma izithombe ezivela ezindaweni eziphansi ze-ablaze. Lapho'Kungezwe ukuthi kubonakale ngokuvuma kwalawa makhamera amasha we-Indoor / angaphandle angu-360 °.
Amakhamera wendabuko e-PTZ angakwazi kuphela indawo ye-almanac eqinisiwe, anamathiselwe ukubonwa kwawo. Amakhamera ethu amasha we-360 ° athola ukuthi ubonakale ubonakale i-arena ngokuphelele ngasikhathi sinye, ngakho-ke ungasondeza ungene endaweni yokutholwa ngemuva kokuqoshwa.
Ayikho i-lag esebenzayo
Njengoba kungekho zindawo ezithinta amakhamera anamakhamera angama-360 °, ungaphunyuka ekusebenzeni kwe-lag kanye ne-advotival backup okuhlotshaniswa namadivayisi we-PTZ.
Ngomqondo ophakeme kangaka wokubuka, ungasebenzisa ngaphansi kwamakhamera angama-360 ° ukucisha inkundla ngokumelene namakhamera we-IP amukelwe. Leyo nhlangano ngaphansi kwesitezi esingaphansi ukuze iqoqwe phezulu, futhi ngaphansi kwe-aliment ukufeza kulo lonke umsebenzi wokufaka.
Kususelwa ku-5 Sensor ngokujikeleza ngokubuka okungu-360 °
Esebenza kahle futhi kwezomnotho ukuba yimodi elula efakiwe, izimboni ezisezingeni eliphakeme zekhwalithi ephezulu
Isebenzisa / H.264 High Profile Plafin Compression Technology
I-ICR icacisa ukushintsha okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo, ukubhekwa kwemini nobusuku
Ukulungiswa kwesoftware yeWebhu nokwesekwa
Sekela kuze kufike ku-128G Micro SD / SDHC / SDXC Agenda Isitoreji Esiboshwe
Hlela izinga lokushisa le-Alfresco kanye ne-Climininess Ambiance Ambiance enkulu yesehlakalo
Sekela i-IP66 materproof no-duproof, ik10 defacer level design
PHAMBI I-LS Vision ethuthukisiwe ye-WiFi NVR engenantambo enomsebenzi wokuhambisa ama-super
Ikhamera ye-LS Vision IP - izinga lekhwalithi yevidiyo. OLANDELAYO